लोकप्रिय १०० खेलाडीः शीर्षमा रोनाल्डो यथावत, मेस्सी तेस्रोमा
विश्वका सबैभन्दा चर्चित खेलाडी को हुन् ? या विश्वका चर्चित १०० खेलाडीमा को को पर्लान् ? यो प्रश्नको जवाफ खेलकुद सम्बन्धी चर्चित अनलाइन पोर्टल इएसपिएन डट कमले खोतल्ने प्रयास गरेको छ ।
समाजिक सञ्जालमा हुने चर्चा र इन्टरनेटमा खोजी गरिएको आधारमा इएसपिएनले उत्कृष्ट तथा चर्चित १०० खेलाडीको सूची तयार पारेको छ ।
सूचीमा फुटबल र क्रिकेटका अधिकांश चर्चित खेलाडीहरु समेटिएका छन् भने बास्केटबल, टेनिसका स्टारहरु पनि समेटिएका छन् ।
सूचीको पहिलो नम्बरमा रियल मडि्रडका पोर्चुगिच स्ट्राइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डो छन् । अघिल्लो बर्ष पनि उनी पहिलो नम्बरमै थिए । सामाजिक सञ्जाल इस्टाग्राममा उनका ९३ मिलियन फलोअर्स छन् भने फेसबुकमा ११८.८ मिलियन र ट्वीटरमा ५०.४ मिलियन फलोअर्स छन् ।
सूचीको दोस्रो नम्बरमा अमेरिकी बास्केटबल स्टार जेम्स लेब्रोन छन् । सामाजिक सञ्जालमा त्यति धेरै फलोअर्स नभएपनि हिरो-भिलेन-सुपरहिरोको उनको जीवनकालले गर्दा उनी चर्चामा छन् । अघिलो बर्ष पनि उनी दोस्रो नम्बरमै थिए ।
बर्षका चर्चित खेलाडीको तेस्रो नम्बरमा बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लियोनल मेस्सी यथावत छन् । मेस्सी ट्वीटर चलाउँदैनन्, इन्स्टामा ६५.१ मिलियन र फेसबुकमा ८६.६ मिलियन फलोअर्स उनका छन् ।
विश्व टेनिसका सुपरस्टार रोजर फेडेरर चर्चित खेलाडीको सूचीमा चौथो स्थानमा छन् । यो बर्ष १८ पटकका ग्राण्डस्लाम च्याम्पियन तथा २८ पटकका फाइनलिष्ट यी स्वीस नागरिकले एक स्थान सुधार गरेका हुन् ।
पाचौं स्थानमा अमेरिकी गल्फर फिल मिकेल्सन छन् । उनले अघिल्लो बर्षभन्दा ८ स्थान सुधार गरेका हुन् ।
अघिल्लो बर्ष चौथो स्थानमा रहेका नेइमार दुई स्थान खस्कँदै छैटौं स्थानमा पुगेका छन् । बार्सिलोनाका लागि खेल्ने यी ब्राजिलियन स्ट्राइकर विश्वको उत्कृष्ट फुटबलर बन्ने पथमा छन् ।
सूचीको सातौं स्थानमा कीर्तिमानी जमैकन धावक उसेन बोल्ट । उनी यसअघि १५औं स्थानमा थिए । आठौं स्थानमा अमेरिकी बस्केटबल खेलाडी केभिन डुरेन्ट, नोवौं स्थानमा स्पेनिस टेनिस खेलाडी रफायल नदाल र दशौं स्थानमा अमेरिकी गल्फर टाइगर उड छन् ।
भारतीय क्रिकेट कप्तान बिराट कोहली सूचीको १३औं स्थानमा छन् । उनी एसियाली क्षेत्रका सबैभन्दा चर्चित खेलाडी बनेका छन् भने भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी १५औं स्थानमा छन् ।
अमेरिकी जुडो स्टार रोन्डा रोउसे चर्चित खेलाडीको सूचीमा १६औं स्थानमा छिन् । ओलम्पिक स्वर्ण बिजेता रोन्डा महिला खेलाडीमध्ये सबैभन्दा चर्चित छिन् ।
इजिप्सियन फुटबल सुपरस्टार मोहम्मद सालाह चर्चित खेलाडीको सूचिमा १००औं नम्बरमा छन् ।
प्रकाशित मिति: 31 May, 2017